Xiddiga kooxda Manchester City ee Kevin De Bruyne oo jabiyey rikoorka caawinta horyaalka Premier League – Gool FM
(Manchester) 26 Agoosto 2019. Laacibka khadka dhexe ee kooxda Manchester City, Kevin De Bruyne ayaa jabiyey rikoorka caawinta horyaalka Premier League kaddib markii uu shalay sameeyey caawintiisii 50-aad ee EPL.
Kevin De Bruyne ayaa noqday ciyaaryahankii sida ugu dhaqsiyaha badan ama kulamada ugu yar ku gaaray 50 gool caawin taariikhda horyaalka Premier League.
Kubbad abuurahan reer Belgium ayaa gool ka caawiyey Sergio Aguero intii lagu guda jiray kulankii ay guusha ka gaareen Bournemouth, isagoo u baahnaa kaliya inuu sameeyo hal caawin si uu u gaaro caawintiisa 50-aad ee horyaalka Premier League.
De Bruyne ayaa haatan 50 gool caawin ku sameeyey 123 kulan oo horyaalka Premier League waxaana uu noqday ciyaaryahanka ugu dhaqsiyaha badan ee 50 gool caawin ku gaara kulamada ugu yar horyaalka Premier League.
Waxa uu De Bruyne rikoorkaas ka jabiyey Mesut Ozil kaasoo 50 gool caawin oo horyaalka Premier League ku sameeyey 141 kulan, laakiin haatan De Bruyne ayaa ah xiddiga kulamada ugu yar ku caawiyey 50 gool oo horyaalka Premier League.
Saddexda halyeey ee kale oo horyaalka Premier League kulamada ugu dhaqsiyaha badan ku caawiyey 50 gool waxa ay kala yihiin Eric Cantona oo 143 kulan ku caawiyey, Dennis Bergkamp 146 kulan ku gaaray iyo Cesc Fabregas 165 kulan ay ku qaadatay.